LERIVA MANAHIRANA : ISIKA TSY MANAIKY NY HITONDRAN’NY MPITONDRA MPANGALATRA – MyDago.com aime Madagascar
LERIVA MANAHIRANA : ISIKA TSY MANAIKY NY HITONDRAN’NY MPITONDRA MPANGALATRA
Mila mandinika tsara isika hoy ny Cst Leriva Manahirana androany teny amin’ny Magro Behoririka, amin’ny toe-draharaham-pirenena. Raha tsy mitandrina isika hoy izy eto Madagasikara dia izao tetezamita izao mira Repoblika fahaefatra ho an’ny halatra sy famonoan’olona no zavamisy eto. Ny mpandinika iray aza hoy izy dia nilaza fa efa lasa ambongadiny ny harena. Io tetezamita io no rohitin’ny frantsay ary io ihany koa sary tiany apetraka mba hahafahany mangalatra ny harem-pirenena. Raha mijery ireo kandidà isika hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity dia movansy Rajoelina ihanyno vakivakiany dia nanao Sonia nytondrozotra. Dikany hoy izy dia ilay ekipany mpangalatra ireo miparitaka ireo ka te hitondra ny Repoblika fahaefatra. Izay no mahatonga ny movansy Ravalomanana hoy izy tsy hanaiky io fifidianana io satria ekipan’ny mpangalatra daholo no ao anatiny. Raha tsy mazava hoy Leriva ny baikon’I Dada dia rombo ihany no mety, far aha vao tsy izay dia ry zalahy indray no hangalatra. Tsy hoe rombo dia famonoan’olona hoyizy fa ny fomba rehetra izay hisakanana io fifidianana io. Efa mandeha sahay ny hoe kandidam-panjakana , noho izany tsy azontsika ekena izany. Entano ny olona hoy izy fa isika tsy manaiky ny hitondran’ny mpangalatra. Izay no hisisian’ny movansy Ravalomanana amin’io fifidianana io. Ataony ny frantsau amboletra fotsiny ny fifidianana nefa ny andiam-balala misy eto amintsika, ny asan-dahalo. Noho izany tsy hifidy ireo olona izay tsy maintsymifindra monina noho ny asan-dahalo. Fifidianana inona hoy ny fanontaniana napetrany no hotanterahana amin’izany? Lazaina anefa fa fifidianana madio, mangaraharaha, tsy misy fanilihana, kanefa mbola misy ny voailika ihany. Izany zavatra rehetra izany hoy Leriva no alamina vao manao ny fifidianana. Tsy isika akory hoyizy no malaina hanohana olona fa ataovy mazava ny fitsipi-dalao. Namafisiny fa tsy misy vahaolana eto raha tsy ny fampihavanana ataon’ny FFKM amin’izy efadahy no tanterahina. Noho izany ny zavatra hangatahina amintsika hoy izy dia ny fivavahana mba hampahery ny filoha Ravalomanana ahitany izay làlana ivoahana amin’izao krizy izao.
LERIVA MANAHIRANA : MILA MAHERY ISIKA
LERIVA MANAHIRANA : TSY MAHALALA AFA TSY NY FILOHA RAVALOMANANA HANAVOTRA NY FIRENENA NY VAHOAKA
LERIVA MANAHIRANA : MISY TSY MANDEHA AO AMIN’NY LISIM-PIFIDIANANA AO
Auteur Solo Razafy*Publié le 2 septembre 2013 2 septembre 2013 Catégories Politique
11 réflexions sur « LERIVA MANAHIRANA : ISIKA TSY MANAIKY NY HITONDRAN’NY MPITONDRA MPANGALATRA »
2 septembre 2013 à 18 h 18 min
Raha mihaino tsara ny kabary nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC farany teo dia mazava fa tsy mitombona ny fikarakarana ny fifidianana ho avy..Noho ny Antony maro fa indrindra
-tsy manaraka ny tondrozotra ,izay miantoka ny fahalalahan’ny tsirairay hilatsaka ho fidiana sy ary koa mamela ny mpifidy alalana hifidy ny candidat na candidate tiany ho fidiana
-ary ho fifidianana mazava ,tsy mosy faneriterena avy any ivelany..
Koa mitrika izany ny tolona : malalaka ny fifidianana : mahazo milatsaka ho fidiana izay te hilatsaka ary mifidy izay tiany ho fidiana ny mpifidy !
Tsy izay no fifidianana nokonikononin’ireto mpanongam-panjakana fa izy samy izy no nifanambotra izay ho fidiana sy vonona ny hividy ireo olona tereny hifidy..
TSY MANAIKY IZANY ISIKA !ARY NY DINGANA VAOVAO DIA HOHAMAFISIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AMIN’NY RESAKA TATAONY AMINTSIKA AMIN’ITY ERINANDRO ITY !
2 septembre 2013 à 20 h 12 min
O!Ra Celestin o!Tsy mitombina koa ange ilay fikarkarana sy ny fifidianana Referendum « Rajoelina » 2010 kanefa dia vitan i Lavanify sy ny Frantsay ihany e! dia taty aoriana dia toa nankatoavin ny Mouvance ihany
O!Ny zavatra tsy neken ny mouvance nandritra izay efa taona izay dia efa tapitra nekeny ,ka ho hentina aiza ity Tolona ity Ra Leriva o!
2 septembre 2013 à 20 h 57 min
Tsy nanaiky nandray anjara tamin’iny referendum iny ny mouvance Ravalomanana Marc ary tsy nanaiky ny valin’izany référendum izany.
Tsy nisy zava-tinapaky ny mpanongam-panjakana nahazo antoka tamin’ny mouvance : io no atao hoe fitpndrana nanavaka , assymétrique , unilatéral ka izay « articles » nahasoa ny mpanongam-panjakana no « neken’ny troika/sadc..dia nihazakazaka r’i chissano sy ny frantsay nametraka ireo candidats azny antoka eo amin’ny fifidianana !
Fantatr’izy ireo ve sa tsia fa tapitra ny fe-potoana mamela an’i chissano ho médiateur ?
ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia naharaka ny calendrier ary dia tonga ny fotoana tsy maha -médiateur intsony an’i chissano..dia nidaraboka daholo ny asam-boto..
Eo isaka izao fa amin’ny alarobia ny Filoha RAVALOMANANA MARC no hiresaka be momba ny dingana manaraka eo amin’ny tolona !
2 septembre 2013 à 21 h 28 min
Miandry ny hafatrao Andriamatoa Filoha
3 septembre 2013 à 2 h 52 min
mila mitandrina tsara fa reo ben’ny tanàna sasany ihany koa izao dia efa nivadika foza ka manohana an’i hajo; toy ny atsimondrano. angamba ny tolona natao nandritra ny 4 taona dia tsy midika fa ankatoavina na ampandresena ireo FOZA ORANA fototr’izao krizy izao. Fongory h@ farany ny foza.
3 septembre 2013 à 6 h 13 min
Matoa izay misy ny mivadika dia efa tsisy fanatenana ho azy intsony ao ka tsy aleo ve any amin’izay ahitana masoandro mihiratra indray eh…. ilay hoe fongory indray ny f… toa ohatran ianareo izao ho ringana an…. ny mpitolona aza efa maro no niala fa ohatran reraky ny hafanana sy ny hatsiaka eo @ MAGRO eo fotsiny… isan’andro zao de blabla foana nefa toa tsy hita ihany izay tena apoaka… MAEREZA IHANY LO NA DE IZANY AZA FA METY MBA AHAZO PLACE IHANY EH…
3 septembre 2013 à 9 h 13 min
O rey olona a! za tena zanak’i Dada hiringiriny , izao nefa no mba teniko sy torohevitro:
1)Mialà haingana ianareo TIM zao ankehitriny zao ao anaty transition zao fa matoa isika mahantra sy fadiranovana toy izao dia ianareo koa isan’ny responsables @ izanyfa tsy afa-miala maina eo. Aza ilaozana manao menace foana hoe hiala hiala nefa ny tombotsoam-poza iarahanareo migoka ao ihany
2)Ajanony na aato aloha farafaharitsiny ny hetsika ao @ Magro fa aza hampadriana adrisa intsony sy ahnaovana fanantenana poak’aty ireo olona efa reraka sy ketraka ary noana tonga isan’andro ao ireo. Mba fantatrareo ve hoe vola ohatrinona zay no lanin’ireo mpitolona mahafatrapo ireo h@ 2009 no nankaty?
Mbola ho tsarain’ny tantara ianareo mampiesona ny vahoaka sy nanaboridana an’i Dada zao.
Ny manahirana r’Ingahy Manahirana dia :
– Ianareo mbola miara misaosy ao, na dia efa fantatrareo hatry ny ela aza fa tsy izay ianareo vitsy an’isa no hampiova ny toe-draharaha. Ny Filoha efa ela no niteny mazava fa raha tsy vonona ny hanantanteraka ny tondrozotra ireo mpanongam-panjakàna dia tokony mila amin’ilay rafitra ! Mba narahinareo ve izany ?
– Tsy CST, olona avy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana ihany koa ve no niazakazaka nanao sonia niaraka tamin’ilay Péri ( izay tsy nandrenesam-peo na kely aza momba ny tsy fampiarana an’ilay tondrozotra, kanefa dia izy no Filohan’ny « fanaraha-maso rehetra » ? Dia izao voahilika ny candidate natolotry ny antoko Zanak’i Dada ?
– Tsy ny Filohan’ny CT koa ve no tsy sasatra manao sonia, sy manome lanjany an’ilay Lalàm-panorenana fôpla, kanefa dia avy amin’io Lalàm-panorenana fôpla io no hoe « hikarakaràna » an’ilay fifidianana ?
Toa ambava tsy mila foana ianareo mianakavy raha dinihina, kanefa ao am-po mitaralila ? Enga anie ka diso fandinika ny tenako, fa raha ny zavatra re etsy sy eroa, dia mahakivy sy manahirana ?
Raha nahazo ny anjarany ireo CES vaovao izay lazain’Ingahy Rakotoarivelo fa hahaleotena fa tsy ho toa ireo nesorina, iza avy indray izany nandray 2 miliara tsirairay izany ?
Milaza ianareo fa tsy manaiky ny hitondran’ny mpitondra mpangalatra ! Efa ho dimy taona izay ny mpanongam-panjakàna no mitondra fanjakàna, ary HIKARAKÀRA FIFIDIANANA, IZAY TOA TOHANANAREO MAFY DIA MAFY, RAHA NY FIJERIN’NY REHETRA NO ENTINA ETO !
Mba nihaino tsara ny kabarin’ny Filoha va ianareo rehetra nihiditra tao anatin’ilay rafitra tsy mamokatra ?
Tahak’izao ny fandraisanay izay voalazany mantsy : « Tena vonona ny hanohan’ahy marina, sa mbola hisabàka sy hiaro seza fotsiny » ?
Asehoy amin’ny vahoaka fa tena tia tanindrazana ianareo, ary vonona ny hiaro ny hoavin’ny taranaky ny malagasy, ary izany atao hoe FIRENENA TAN-DALÀNA izany !
Aoka izay ny resaka be, fa ny rindrina aza manan-tsofina !!!
3 septembre 2013 à 14 h 21 min
Ny tolona tsy entina amin’ny fo, fa ny ho avin’ny taranaka no jerena. Koa raha tena mpitolona dia tokony ajanona ny famendrofendroana.
Tsy misy ny tonga lafatra fa tsy maintsy mifamela ary mitady hatrany ny firaisana amin’ny tolona, ary tsy mora kivy ka ho latsaka ao anaty fandriky ny fahavalo, dia ny fanangolena izany !
3 septembre 2013 à 14 h 33 min
Enjana rey olona ny manjo ireto zanak’i dada a! Miombona alahelo amin’izy ireo aho! Mbola tsaroako tokoa manko fony ingahy Ravalo no filoha an, tena teo am-pelatanany ny fanjakana sy ny hery ary ny vola sy ny voninahitra! Nanjakazaka i leiry! Tsy nisy nieritreritra hoe ohatra izao no ho fiafaran’izy sy ireto zanany an! Aza manody ny comme ça lehireto a! Mahaiza mionona ry zanak’i dada a! Mbola ho eo ihany izy hizara bobnbon ho anareo e!
I denise indray izao io mody hoe densie io, ny Malagasy no potraka sy trotraka, fa tsy i Dada velively.
Izao ny gasy na i Comores aza mihomehy azy, tena mampahonena mitorona tokoa ! Dia faly ery denise densie amin’izany !
Tsy maintsy ho avy ilay maraina fa manana finoana ry Malagasy !
Précédent Article précédent : Filoha Ravalomanana Marc : Ny fampihavanana ataon’ny FFKM no tokony handeha alohan’ny fifidianana
Suivant Article suivant : DISO NY FILAZANA FA HILAMINA NY FIRENENA REHEFA VITA NY FIFIDIANANA